Homeसमाचारकागतीको यति धेरै फाइदाहरु जान्नुहोस्
December 21, 2020 admin समाचार 9060
कागती बहुउ’पयोगी फलफुल मध्ये एक हो । यो नेपालको जुनसुकै भागमा सजिलै पाउन सकिन्छ । यद्यपी यसलाई फल’का रूपमा भन्दा पनि सर्वत वा अचार ब’नाउन प्रयोग गरीन्छ । कागतीका अनगिन्ती फाइदा छन् । आज हामी कागतीका यीनै फाइ’दाबारे चर्चा गर्नेछौ ।
खानामा केही थोपा काग’तीको रस हालेर खाएमा यसले खानाको स्वाद बढाउँछ । कागतीको सेवनले अपच र कब्जि’यतमा लाभ प्राप्त हुन्छ । यसको सेवनले रगत शु’द्धिकरण गर्ने र शरीरका अन्य विकार समेत हटाउँछ । कागतीलाई सफा पानीमा निचो’रेर खाएमा शरी’रमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । पिसेको पुदिनाको पा’तलाई कागती पानीमा मिसाएर खाएमा शरीर शितल हुन्छ । कागतीको प्रयोगले दाँतको हेरचाह र सुर’क्षामा समेत लाभ पुर्याउँछ ।
दाँत दुखेको ठाउँमा का’गतीको रस राख्दा यसले दाँत दुखाइलाई कम गर्दछ । गिजामा कागतीको रसले हल्का मसाज गरेमा गि’जाबाट रगत आउने समस्या रोकिन्छ । कागतीको जुस खादाँ मुख गन्हाउने समस्याबाट समेत मुक्ति पाउन सकिन्छ । दाँतको सफा’ईमा कागतीको प्रयोग लाभदायी हुन्छ । तर चाडैं कुल्ला गर्नु पर्दछ । कपाल च’म्किलो बनाउन र यसको सुरक्षामा काग’तीको रस उपयोगी हुन्छ ।
कपालको जरामा कागती लगा’उनाले चायाँ र कपाल खस्ने समस्यामा लाभ मिल्दछ । पोलेको भागमा तत्काल काग’तीको रस दल्ने हो भने फोका उठ्दैन । पोलेको घाउमा कागतीको रस नियमित लगाउँदा दाग निको भएर जान्छ । मो’टोपना कम गर्नमा समेत कागतीको सेवन उपयोगी हुन्छ । हैजा र मलेरिया रोगमा समेत का’गतीको सर्वतको सेवन लाभदायी हुन्छ ।
तातो पानीमा का’गतीको रस हालेर पैताला डुबाउँदा खुट्टा दुखाई निको हुन्छ । मनतातो पानिमा कागतीको रस हालेर नु’हाएमा शरीरको दुखाई समेत कम हुन्छ । शरीरमा आएका गिर्खा र मासुका डल्लालाई कागतीको रसले बिस्तारै हटाउँछ । नियमित काग’तीको सर्वत पिउनेलाई पत्थरीको समस्या कम हुन्छ । घाँटीमा हुने संक्रमण, घाँटीको खरावी र दुखाईमा कागतीको सर्वत उपयो’गी हुन्छ ।
मुटुका सम’स्या भएका व्यक्तिलाई समेत कागतीको सर्वत अति उपयोगी हुन्छ । कागतीमा पोटासियम तत्व हुने भएकाले उच्च रक्तचापमा नियन्त्रण ल्याउँछ । कागतीको सेवनले वाक’वाकी लाग्ने, टाउको दुखाईमा नियन्त्रण गर्दछ । मानसिक तनाव नियन्त्रण गर्न पनि कागतीको सर्वतको सेवन उपयो’गी छ ।-खबर हबबाट
सोमबार यस्ता काम गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास
अञ्जुको जोडीले अन्तरवार्ता भरी एक अर्काको हात छोडेनन्, प्रेम यसरी परेको थियो भन्दै खुलाए (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 27, 2021 admin समाचार 5024
गायीका अञ्जु पन्तले केही स’मय अघि विवाह गरिन् । सम्बन्ध वि’च्छेद पछि करिब एक दशक एकल जिवन विताइरहेकी अञ्जुले थीर कोइरालासंग दोस्रो वि’वाह गरेकी हुन् । उनी अहिले वैवाहिक जि’वनमा निकै खुसी भएको देख्न सकिन्छ
November 28, 2020 admin समाचार 8641
जाडोको मौ’सममा सुन्तलाको मौसम हुने भए’काले घाममा बसेर सुन्तला खाने गरिन्छ । सुन्तलामा पोटा’शियम, भिटामिन सी, फ्लेबो’नोइड्स र फा’इबर जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । जुन स्वास्थ्य’का लागि निकै फाइदा’जनक हुन्छ । यसका साथै सुन्तला मुटु’लाई स्वस्थ्य
March 27, 2021 admin समाचार 4652
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242038)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229942)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229569)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228454)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227945)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227409)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226736)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226318)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194337)